बन्दको मार आज पनि | paniphoto
बन्दको मार आज पनि	दिपध्वनी / May 20, 2012 /4Comments जेठ १४ लाग्नै लाग्दा विभिन्न माग राखेर बन्द गर्ने क्रम जारी छ । काठमाण्डौ बितेका १३ दिनमा आठौं पटक बन्द भएको छ । मोफसलमा त झन् स्थिती झन् बेहाल छ । आज बिहानैदेखि म बसेको क्षेत्र गौशालामा बन्द थियो । बिस्तारै थाहा भो, बन्दले काठमाण्डौ लगभग ठप्प छ । बन्दमा गौशालाका केही तस्विरहरु हेर्नभित्र आउँनुस् बन्द गराउँन गौशाला चोकमा राखिएको ब्यानरठप्प गराउँने निउँमा कति सहनु अराजकता ! तलको तस्विर हेर्नुस् जहाँ बन्द गराउँनेहरु जबरजस्ती साइकलको हावा खुस्काइदिदैछन् । यी बन्दमा शहर हेर्नका लागि त पक्कै हिडेका हैनन् । तिमीहरुको अधिकारका लागि यीनीहरुले रोजगारी किन त्याग्ने ? तलको तस्विर गौशालाको एउटा भोजनालयको हो । म पुग्दा सडकबाट यसमा ढुँगा हान्दै थिएँ बन्द गराउँनेहरु । तस्विर लिन लागेको मलाई नखिच्न तर्साइयो । डरले खाना खाँदै गरेकाहरु हतार हतार जुठै हात भोजनालयबाट निस्किन बाध्य भए । खाना खान पाउँने यीनीहरुको अधिकार थियो कि थिएन, सायद बन्द गर्नेहरुलाई सोध्नु पर्थ्यो । यतिका बन्दमा घुम्न आएका टुरिस्टले दुख पाउँनु सायद सामान्य हो । घर फर्किन लागेका टुरिस्टहरु यसरी रिक्सा ठेल्दै सामान लिएर एयरपोर्ट गएको पनि देखियो । यतिका दुख पाएर फर्किएका टुरिस्टले नेपालको बारेमा कस्तो सन्देश लिएर फर्केलान् ! लौ अहिले बन्द गर्नेहरुले राज्य नै पाए रे, भोली चलाउँन पैसा बटुल्ने यस्तै टुरिस्टहरुबाट पनि त हो । कुरा बिगारेर सपार्नु भन्दा बिग्रनै नदिनु राम्रो हैन ?
Tags: बन्दको मार आज पनि / Posted in: समाचार/विश्लेषण
अमृत नेम्बाङ says: May 20, 2012 at 2:02 pm / Reply
म पनि लिम्बु हुँ साथी / तर मलाई यस्तो खालको संघीयता चाहिदैन /. मैले यसो भनिरहदा कति लिम्बुहरु अन्तरघाती भनिरहेका होलान् / तर प्यारा लिम्बुदाजुभाइ तथा दिदीबहिनी यसरी झगडा गरेर बन्द हड्ताल गरेर हामी कही पनि पुग्दैनौं / एउटै मात्र जातले कुनै पनि ठाउँको विकाश हुन सक्दैन
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00 पुण्य भट्टराई says: May 20, 2012 at 2:06 pm / Reply
यस्तो अराजकताले माग पुरा गर्ने हैन देश नै अफ्ठ्यारोमा पर्ने चै हुन्छ होला
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00 Namrata Basnet says: May 20, 2012 at 2:29 pm / Reply
ति भात खाँदा खादै जुठै हात उठ्नु पर्ने ले दिने हो त राज्य / बेकारको बन्द
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00 Saroj says: May 20, 2012 at 8:05 pm / Reply
कानुन नभएपछि जसले जे गरे पनि त भो नि रोक्ने कसले ?
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00 LeaveaComment Cancel Reply	Name * Email * Website Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)
नमस्ते, म गणेश कार्की । लेख्न मन पराउँछु र आफ्नो लागि लेख्छु । आफुलाई मन लागेका बिषयमा लेख्छु । मैले यो मात्रै लेख्नु पर्छ या यसरी लेख्नु पर्छ भन्ने नियम बनाएको छैन । जे सुकै जुन सुकै बेलामा लेखिदिन्छु । मलाई फेसबुकमा, ट्विटरमा भेट्न सक्नुहुनेछ । मेरो बारेमा थप जानकारी यहाँ पाउँनु हुनेछ ।